Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè rutere Spain - RayHaber
HomeỤWAEurope34 SpainNdị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ na Spain
01 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 Spain, Europe, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General 0
ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-amalite ọrụ obodo ha
Ọrụ ụgbọ oloko 700 kagbuo na Spain n'ihi iku a kpọrọ General Work Confederation (CGT)
Mgbe mkparịta ụka dị n'etiti Ragbọ Okporo Spanishzọ Spanish (RENFE) na General Trade Confederation (CGT) kụrụ, ndị ọrụ kpebiri ịmalite ọrụ. Ndị otu ndị na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ọrụ (CGT) na --achọ mkpebi nke ihe dị ka ọnụego ego erughị ala, outsour na enweghị ndị ọrụ.
Ekwuputara na 12.00, otu n'ime ụgbọ njem, njem, ụgbọ njem na ụgbọ elu dị elu na mba ahụ, kagburu mkpebi mkpebi nke ndị ọrụ ọrụ dị n'etiti 16.00 na 20.00 na n'etiti 24.00 na 700. Ndị ọrụ General Work Confederation Union (CGT) kọrọ na 700, otu n'ime ndị njem, ụgbọ ibu, ụgbọ njem na ụgbọ elu dị elu, akagbuola n'oge iku ahụ.
Ọgbawa nke ndị ọrụ okporo ụzọ, nke dabara na oge ezumike, ahapụla ụmụ amaala ahụ n'ọnọdụ siri ike, karịchaa na isi obodo ndị dị ka Madrid na Barcelona. RENFE, nke na-ekwe nkwa inye ndị njem obere pasent 50 pasent, kwupụtara na enweghị ụgwọ ọzọ a ga-akwụ ụgwọ maka mgbanwe na nkwụghachi tiketi. Njikọ Azụmaahịa General General (CGT) 14 na 30 ga-aga n’ihu n’August na 1 na Septemba.
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-aga agha na Spen 05 / 09 / 2015 Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-aga agha na Spen: Na Spain, na oku nke ndị ahịa Semaf, CGT na CCOO, ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè gara agha. Malite na etiti abalị na oge 23 na-egbu, ya mere, ụgbọ okporo ígwè na-azụ 20 pasent, 75 pasent nke ụgbọ okporo ígwè, 72 pasent nke ọrụ ụgbọ oloko dị elu n'etiti obodo, ọrụ kachasị dị mkpa ejiri n'aka. Ndị ọchịchị kwupụtara na a ga-ebu 353 site na ụgbọ okporo ígwè 255, na 527 ga-eme maka njem 343 nkịtị. E nweghi nsogbu siri ike n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè n'ụtụtụ n'ihi ụda ahụ, a kọkwara ọrụ kacha nta dị ka ihe kwesịrị ekwesị. Njirimara nke ụgbọ okporo ígwè na ire ere ha niile site na njedebe nke afọ 2019, ọhụrụ nkwekọrịta na ndị ọrụ ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 14 September 1908 Anatolian na Oriental Railway ọrụ gara n'ihu ... 14 / 09 / 2012 14 September 1908 Anatolia na East Railway ọrụ gara agha. Ndị ọrụ rịọrọ ka oge ọrụ ha belata site na 10,5 ruo 8,5 awa. Ụlọ ọrụ ahụ kwetara inye ego ọrụ 20 na ọkara ụgwọ maka onye ọrụ ụgwọ.
Taa na History: 14 September 1908 Anatolia na East Railway ọrụ na-egbu. 14 / 09 / 2015 Taa na akụkọ ihe mere eme 14 September 1908 Anatolia na East Railway na-arụ ọrụ. Ndị ọrụ rịọrọ ka oge ọrụ ha belata site na 10,5 ruo 8,5 awa. Ụlọ ọrụ ahụ kwetara inye ego ọrụ 20 na ọkara ụgwọ maka onye ọrụ ụgwọ.
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Belgium na-eti mkpu 27 / 11 / 2013 Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Belgium na-aga agha: A na-agbakwunye ndị ọrụ ndị ọrụ Belgian Railway Company (SNCB) ọrụ ọzọ, ndị na-anọchi anya oge ụfọdụ. Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-ekwu na a ga-enwewanye ihe ọzọ n'izu a. Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè belgian kwupụtara na ha emejuputala ihe ngwugwu ọhụrụ mgbe Minista Development na Ụlọ Ọrụ Obodo Jean-Pascal Labille kwadoro ozi na 2018, nke gụnyere na ngwugwu Railway Réform, kwadoro na 1000 ga-akwụsị nkwekọrịta ahụ. Enweghi ike n'etiti ndị ọrụ Belgian Railway Company SNCB amalitela igosi na a ga-emekwu omume ndị ahụ. Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-esitekwa na njikọ, Ụzọ ụgbọ okporo ígwè ...
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-aga agha na France 13 / 12 / 2013 Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-aga agha na France: N'ihi ụda ahụ, ụgbọ okporo ígwè na-ebugharị na mba ahụ ka kpọnwụrụ akpọnwụ. E kpochapụrụ 40 n'ihi ụda nke ndị ọrụ na-ekwupụta mgbanwe ndị National Railway Administration chọrọ ime n'ime ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, mmeri nke ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ na Paris, isi obodo ahụ nwere oge siri ike na njem. Ike 50 nke ụgbọ okporo ígwè na-emegharị emeela emeela ka ogologo oge kwụsị maka ndị isi obodo, karịsịa n'oge ọrụ ụtụtụ. France na Belgium na England, nke jikọtara ọrụ ụgbọ oloko ahụ, ebe Switzerland na Ịtali, nke jikọtara na 30 percent nke ọrụ ụgbọ oloko kagbuo. A na-atụ anya na a ga-akwụsị iku anya na ụtụtụ Friday ....
Ndị ọrụ ugbo na France na-aga agha 12 / 06 / 2014 Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè nọ na France gara agha: Na France, ụda nke ndị ọrụ nchịkwa ụgbọ okporo ígwè na-eme ka okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-abanye n'obodo dum. Ogbugba a, nke ndi otu ndi otu a choro maka ha, ga-aghochi echi. Na mgbakwunye na ụlọ ụlọ okporo ígwè, na iku gburu ụfọdụ ụgbọ elu mba. Ọ bụ ezie na ụgbọ ahụ si France gaa England na Germany enweghị mmeri ahụ, ụfọdụ n'ime ụgbọelu ndị na-apụ Belgium, Netherlands na Spain aghaghị ịkagbu. Site n'ikere òkè nke ndị ọrụ na ụgbọ oloko suburban na Paris, a na-agbagha njem dị na isi obodo. N'ihi iku aka na ụgbọ okporo ígwè ndị dịpụrụ adịpụ, ndị isi obodo chọrọ ịga rụọ ọrụ na ugbo ha ma nwee nsị kilomita n'ogologo n'okporo ụzọ mgbanaka. Government ...
Ndị ọrụ okporo ụzọ na-amalite ịkụ na Spain 17 / 09 / 2012 Umu ndi agha na-emegide ikuku nke ndi oru ugbo uzo di iche iche n'ime ochichi nke ndi ochichi, 3 gara agha 24 nke abuo mgbe o gasiri. A mara ọkwa na ihe karịrị ụgbọ okporo ígwè 261 ga-emetụta ndị agha na-arụ ọrụ okporo ígwè na 350. Ministry of Transport, ọrụ kacha nta na pasent nke 73 ga-enye. Na gọọmentị gọọmentị na-ezube ịbawanye asọmpi na àgwà na njem ụgbọ oloko ma belata ọnụahịa, ndị na-azụ ọzụzụ kweere na site na atụmatụ a, ọtụtụ puku ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè ga-anọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ ndị a ga-efunahụ na ọrụ ahụ ga-aka njọ. N'aka nke ọzọ Madrid na Catalonia bụ kwụrụ ọtọ Öte
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Spain
Traingbọ oloko elu Spain
Nnukwu Azụmaahịa General
ụgbọ okporo ígwè spain
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-aga agha na Spen
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-aga agha na France
Ndị ọrụ ugbo na France na-aga agha
Ndị ọrụ okporo ụzọ na-amalite ịkụ na Spain